भत्काउने भनिएको शितल निवास अब ‘रेट्रोफिटङ’ गरेर संरक्षण, कसले बनायो यस्तो प्लान ? — Imandarmedia.com
भत्काउने भनिएको शितल निवास अब ‘रेट्रोफिटङ’ गरेर संरक्षण, कसले बनायो यस्तो प्लान ?
२०७२ साल बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भुकम्कबाट क्षति पुगेका कारण भत्काउने भनिएको शीतल निवास अब नभत्काइने भएको छ । सम्पदागत धरोहरका रुपमा चिनिएको शीतल निवासलाई अब रेट्रोफिटङ गरेर संरक्षण गरिने भएको छ ।
राष्ट्रपतिका लागि नयाँ भवन बनेपछि शीतल निवास भत्काउन डिजिकन इन्जिनियर्स कन्सल्टेन्टलाई ठेक्का समेत दिइएको थियो । भवनको कलाकौशल र बनोट जोगाउन प्रबलीकरण गर्नुपर्ने आवाज उठेपनि सहरी विकास मन्त्रालय, भवन विभाग र केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयनका अधिकारीहरु भत्काउने पक्षमा लागेका कारण ठेक्का पनि दिइएको थियो ।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वयंमले छुट्टै अध्ययर्न गर्न लगाएकी थिइन । विज्ञहरुले अग्रभाग भत्काउन नपर्ने रिपोर्ट दिएपछि शीतल निवास भत्काइएको थिएन ।
राष्ट्रपति भण्डारी र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीबीच बिहीबार भएको भेटमा शीतल निवास नभत्काउने निर्णय भएको छ । अब रेट्रोफिटङ गरेर शीतल निवासको संरक्षण गरिनेछ भने नयाँ भवन बनाउन गुरुयोजना बनाएर अघि बढिनेछ ।
२०७५ असोज २१ गते प्रकाशित